China International Hotel Investment Isonyere na Franchising Ngosi 2022
Ntinye aka nke China International Hotel Investment Joining and Franchising Exhibition 2022
Categories: Owuwu na Ihe Owuwu
The China (Shanghai) mba hotel ulo oru mbo na franchising ngosi (Shanghai), kwadoro site Shanghai jinjiang mba mgbakọ na ngosi co., LTD, ga-enwe na mba mgbakọ na ngosi center (Shanghai). nkwalite nke ụlọ nkwari akụ dị elu, na maka akara ngosi ụlọ oriri na ọ theụ toụ iji kpọọ ike nke ndị franchise, ndị na-etinye ego na ndị nwe ha ka ha nwee ike ịkụnye ndị ọkachamara, iji mepụta ụlọ ọrụ nkwari akụ ụlọ ọrụ na-enweghị ego na aha njirimara.
China International Commercial Real Estate Exhibition Exhibition bụ ikpo okwu maka ndị mmepe ihe onwunwe, ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ, na ndị na-azụ ahịa na netwọkụ ma rute azụmahịa ndị nwere ike ịbụ. Ọ bụ ikpo okwu kachasị mma ịbanye na ahịa ndị China. Ndị mmepe ihe onwunwe nke afọ na ndị na-ahụ maka ọrụ metụtara ala ga-enye ihe ngosi nke ọrụ ọhụụ ọhụrụ ha ma tụlee atumatu na uru mbata na ọpụpụ na nso nso a.
Tags: Franchising & Retailing, Ulo oriri na nkwari akụ